Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Kukhula ukudideka ngenxa yezithintelo zokuhamba
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abantu baya bekhathazeka kukuthintelwa kokuhamba kwe-COVID-19 kwaye nangakumbi babone umgangatho wobomi babo usokola ngenxa yoko.
I-67% yabaphenduli bophando baziva ukuba uninzi lwemida yelizwe kufuneka ivulwe ngoku, inyuke ngepesenti ye-12 yamanqaku ovavanyo lukaJuni 2021.
I-64% yabaphenduli bophando baziva ukuba ukuvalwa kwemida akuyomfuneko kwaye khange kusebenze ekuqulathe intsholongwane (ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-11 ukusukela ngoJuni 2021).
I-73% iphendule ukuba umgangatho wabo wobomi uyabandezeleka ngenxa yesithintelo sokuhamba se-COVID-19 (ukuya kuthi ga kwipesenti ezi-6 ukusuka ngoJuni 2021).
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) uxele ukuba abahamba ngenqwelomoya baya bekhathazeka kukuthintelwa kokuhamba kwe-COVID-19. Uvavanyo olugunyaziswe yi-IATA lwabaphenduli abangama-4,700 kwiimarike ezili-11 ngoSeptemba lubonise ukuzithemba ukuba umngcipheko we-COVID-19 unokulawulwa ngokufanelekileyo kwaye inkululeko yokuhamba kufuneka ibuyiselwe.
I-67% yabaphenduli ivakalelwa kukuba uninzi lwemida yelizwe kufuneka ivulwe ngoku, inyuke ngepesenti ye-12 yamanqaku ovavanyo lukaJuni 2021.
I-64% yabaphenduliyo ivakalelwa kukuba ukuvalwa kwemida akuyomfuneko kwaye khange kusebenze ekuqulathe intsholongwane (ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-11 ukusuka ngoJuni 2021).
“Abantu baya bexakaniseka ngakumbi Izithintelo zokhenketho ze-covid-19 kwaye nangakumbi babone umgangatho wabo wobomi usokola ngenxa yoko. Ababoni mfuneko yokuthintelwa kohambo ukulawula intsholongwane. Kwaye baphose amaxesha amaninzi osapho, amathuba ophuhliso lomntu kunye nezinto eziphambili zeshishini. Ngamafutshane, bayaphoswa yinkululeko yokubhabha kwaye bafuna ukuba ibuyiselwe. Umyalezo abawuthumelayo koorhulumente uthi: I-COVID-19 ayizukunyamalala, ke kufuneka sisekele indlela yokulawula umngcipheko ngelixa siphila kwaye sihamba ngesiqhelo, utshilo uWillie Walsh, IATAUMlawuli-Jikelele.
Inkxaso ikhula kuvavanyo okanye kugonyo ukuze kuthathwe indawo yokuvalelwa
Olona thintelo lukhulu ekuhambeni ngenqwelomoya kuyaqhubeka ukuba ngamanyathelo okubekwa bodwa. I-84% yabaphenduli bachaze ukuba abayi kuhamba ukuba kukho ithuba lokuvalelwa bodwa kwindawo abaya kuyo. Inani elikhulayo labaphendulayo lixhasa ukususwa kokuvalelwa yedwa ukuba:
Umntu uye wavavanya i-COVID-19 (73% ngoSeptemba xa ithelekiswa ne-67% ngoJuni)
Umntu ugonyiwe (71% ngoSeptemba xa kuthelekiswa nama-68% ngoJuni).